TCC Africa na Eider Africa na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ndị nyocha Mentor Early Career si Sub Sahara Africa - AfricaArXiv
bipụtara Johanssen Obanda on 6th May 2021 6th May 2021
Ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha, ikekwe ị maara usoro ndụ nyocha na nsogbu niile na ohere ndị ọzọ. Ọ bụ ozi ọma ma ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha sitere na Sub-Sahara Africa n'ihi na ndị mmekọ anyị, TCC Africa na Eider Africa ekwuputala mmekorita ha iji nye ndụmọdụ na nke ahụ.
TCC Africa na Eider Africa abanyela na nkwekọrịta iwu iji kwado ndị na-eme nchọpụta oge mbụ site na nkuzi na ndụ ndụ ha. Otu n'ime nsogbu ndị isi na-akwado onwe ha na-eme nchọpụta n'oge na-eche ihu bụ ịghọta usoro ndụ ha site na nyocha nyocha na mbipụta. Enweghị nkwado na usoro a, na-enye aka na ọnụọgụgụ na agụmakwụkwọ postgraduate. N'iburu nke a n'uche, TCC Africa na Eider Africa ga-ejupụta ọdịiche site n'inye nkwado ndị ọgbọ na ndị ọgbọ maka ndị nyocha ọrụ oge mbụ.
TCCAfrica ga-enye ọzụzụ na nkwukọrịta sayensị na mbipụta akwụkwọ nkuzi, ebe Eider Africa ga-enye onye nkuzi na nkwado na usoro nyocha nke ndụ maka ndị otu obodo. Ndị na-eme nchọpụta oge mbụ ga-achọ ịdebanye aha maka TCC Africa Courses iji nweta nkwado maka ndụmọdụ ahụ.
Ruo ugbu a, opekata mpe ndị nyocha 900 sitere na Sub Sahara ga-enweta nkuzi ndị ọgbọ site na mmekọrịta a.
More banyere EiderAfrica
Eider Africa bụ nzukọ na-eduzi nyocha, imekọ ihe ọnụ, ma na-etinye aka na mmekorita, na-anọghị n'ịntanetị, yana mmemme nkuzi n'ịntanetị maka ndị ọkà mmụta na Africa. Anyị na-azụ ndị nkuzi ka ha bido usoro nkụzi ha. Anyị kwenyere na mmụta ndị ọgbọ, na-amụ nyocha site na omume, ilekọta onye nyocha niile, yana mmụta mmụta niile. Anyị emeela obodo ndị na - eme nchọpụta na klọb akwụkwọ nyocha anyị ma soro ndị nkuzi mahadum na - arụ ọrụ iji wee zụlite ọzụzụ nyocha gụnyere ihe niile. Weebụsaịtị anyị: https://eiderafricaltd.org/
More banyere TCCAfrica
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwurịta Okwu
TCC Africa bụ ụlọ ọrụ ọzụzụ izizi sitere n'Africa iji kụziere ndị ọkà mmụta sayensị ezigbo nkwurịta okwu. TCC Africa bu onyinye nturu ugo, guzosiri ike dika ihe na-abaghi ​​uru na 2006 ma debanye aha ya na Kenya. TCC Africa na-enye nkwado ikike iji melite mmepụta na nhụta nke ihe nchọpụta'Ahaa site na ọzụzụ na nkwukọrịta ndị ọkà mmụta sayensị na sayensị. Chọpụta ihe banyere TCC Africa na https://www.tcc-africa.org/about
Nke a mara ọkwa na mbụ e bipụtara na https://www.tcc-africa.org/900-early-career-researchers-from-sub-sahara-to-be-mentored-in-their-research-lifecycle/
Mmekọrịta gara aga na TCC Africa na Eider Africa
AfricaArXiv, Eider Africa, TCC Africa, na Nyocha na-esonye n’otu iji mee ka ndị ọkà mmụta sayensị si n’ofe Africa dum jikọta ọnụ na ndị ọkà mmụta sayensị nọ na-eme nchọpụta metụtara Africa maka usoro nke usoro mkparịta ụka 3 na nyocha nke ndị ọgbọ.
TCC Africa na mmekorita ya na AfricaArXiv nyefere ntinye aka na Ike ụlọ maka nyocha nke ndị ọgbọ na ịbịanye aka na Africa.
Categories:	Owuwu ikeNjikọ Aka
Tags: Eider AfricaResearchTCC Africa